Fitsaram-bahoaka | 102 KARA
Niseho lany tato ho ato, ary tetsy sy teroa ny fitsaram-bahoaka na ny antsoina hoe ; » vendicte populaire »
Inona no mahatonga izany ? Ny antony dia satria tsy matoky ny fanjakana intsony ny vahoaka, tsy matoky ny mpitandro filaminana ary tsy matoky ny fitsarana.
Tamin’ny andron’ny faha-mpanjaka dia niteny ANDRIANAMPOINIMERINA fa : » tsy ananako havana ny raharaham-pirenena » ka na amboako na amboan’olona, rehefa vandana dia kary. Ny dikan’izany dia saziana amin’ny heloka vitany na iza izy na iza.
Ankehitriny anefa toa tsy toy izany no zava-mitranga fa na misy hitam-poko hitam-pirenena nahavita heloka be vava aza dia afaka fotsiny izao ka mahatonga ny fiteny hoe : » ireny ilay tsy maty manota « . Misy koa ny tratra am-bodiomby nangalatra ohatra na heloka hafa dia toa tsy nahazo sazy akory. Eo indray ireo voasazy hiditra am-ponja, kanefa afaka andro vitsivitsy monja dia indreny fa mivoaka sy miedinedina ary mandrahona sy manao valifaty amin’ny vahoaka.
Vokatr’izany rehetra izany dia tezitra sy leo ary tofoka ny vahoaka ka mahatonga azy hanao ny fitsaram-bahoaka.
Izao faraparany izao dia nitaky ny sendikan’ny mpitsara mba ho ampiharina amin’ireo voaheloka ny sazy navoakan’ny fitsarana ho azy. Toy ny antso any an’efitra anefa izany, na anaovan’ny Fitondrana bemarenina fotsiny . Tsindry bokotra ihany koa no ataon’ny Fitondrana mikasika ny raharaha toy izany dia very an-javony fotsiny .
KA aiza moa, hoy ianao no tsy hisy ny fitsaram-bahoaka ?
14 novembre 2017 - 0 h 17 min Social 262 vues